36 Best Red Hat Certified Courses Training to brush up Skills
Red Hat Akadzidziswa Kudzidzisa Partner
36 Best Red Hat Ceved Training Courses
1. Tsamba tsvuku - RHCSA paRHEL 7
2. Tsamba tsvuku - RHCE paRHEL 7
3. Tsvuku tsvuku Enterprise Performance Tunning
5. Tsvuku tsvuku JBoss Application Administration II
7. Tsvuku tsvuku OpenStack Administration (CL210)
8. Tsvuku tsvuku CloudForms Hybrid Cloud Management
9. Red Hat System System Administrator III
10. Tsamba yakatsvuku Bhizinesi Clustering uye Storage Management
11. Tsamba Dzvuku Tsvaga Kushambadzira uye Systems Management (RH401)
12. Tsvuku tsvuku Satellite 6 Administration (RH403)
14. Tsvuku tsvuku Ceph Storage Architecture uye Administration
15. Tsvuku tsvuku OpenStack Administration I
16. Tsvuku tsvuku OpenStack Administration II
18. Red Hat CloudForms Mafambiro eIndaneti Mafuro
19. Apache Qpid Kutumira neRuff hat Enterprise Linux OpenStack Platform
20. RabbitMQ Kutumira neRove hat OpenStack Platform
21. High Availability neRopa hat OpenStack Platform
23. Kutarisa neRopa tsvuku JBoss Operations Network
24. SwitchYard Kubudirira neRood hat JBoss Fuse Service Works
25. Ngamera Inokurudzira neRock hat JBoss Fuse
26. Kugadzira App Workflow Applications ne Red hat JBoss BPM Suite
27. Bhizimisi Service Bus Kutumirwa neRood hat JBoss Fuse
28. Tsvuku tsvuku JBoss A-MQ Kuvandudza uye Kuendesa
29. Tsvuku tsvuku JBoss Fuse Rapid Track
32. Kubvumidza Mitemo ne Redhat JBoss BRMS
33. Kutevedzera ne Redhat JBoss BRMS
34. Kuvaka Advanced Red hat Enterprise Applications
35. Tsvuku tsvuku Gluster Storage Administration
Iko Red Hat Certified Training Training Partner (RHCTP) boka revanhu rinobatsira Red Hat zvimwe zvinhu uye vashandi vanoita zvirongwa zvekugadzira, zvinoratidzira zvinoratidza kukudzwa kwechokwadi. IRHCTP inogara iine chikwata chekodzero yeRud Hat yakagadzirirwa uye inosimbisa vanhu vari mutsara wakanaka wevannabe vane ruzivo rwevanyanzvi. Kune dzimba guru rekugona iro rinoramba richida kupinda kana kuisa zvigwaro zvaro muVhidhiyo Yakazarurwa innovation nzvimbo iyo yakashungurudzwa neRud Hat yakasimbiswa basa. RHCTP yeboka revanhu inotora mushure meRud Hat dzidzo dzepamusoro dzemadzimai pahupenyu apo dzichipa kugadzirisa mhinduro kumagetsi ekupedzisira. RHCTP boka revanhu rinoshanda neRud Hat kuti ritaure zvakakosha, kubata kwenguva yakareba, mhinduro dzinogadziriswa kune avo vanosangana nevatengi vanoda IT.
Innovative Technology Solutions ndiyo yakagadziridzwa Red Hat Training Partner. Innovative Technology Solutions (Red Hat Training Partner) inopa Red Hat Yakadzidziswa Kudzidzira Makombiyuta / inodonhedzwa munzvimbo dzeChina dzakasiyana-siyana muIndia: Bangalore, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida uye Pune.
Pasinei nokuti uri kupedza hutungamiri hwako kana kuvaka zvigadziri zvitsva, iyi ndiyo nzvimbo yose inotanga. Ace key errands for Red Hat Enterprise Linux®, Red Hat JBoss® Middleware, Red Hat OpenStack® Platform, uye iyo inongova chidimbu chechando.
Tinoshandisa rundown yedu yakazara yeRud Hat Certified Training courses uye towana nzira inoshanda kwauri.
Red Hat inopa zvose zvingangodaro kuti RHCSA inofunge kutora imwe yezvidzidzo zvepamutemo zvedzidzo kuti igadzirire. Kubatanidzwa mumakirasi aya hazvidiwi, uye munhu anogona kutora chete kuongororwa. Vazhinji vakwikwidzana vanobudirira avo vauya kuchikoro sekunge iye zvino vane ruzivo rwakakosha uye mushumo wemashoko kuti kirasi yakave nemugumisiro wakanaka kwavari.
Kuti awane ruzivo rweRHCE, mumwe munhu anofanirawo kupfuurira kuongorora Red Hat Certified System Administrator (RHCSA). Mumwe munhu anogona kupinda mukati uye kutora mvumo yeRHCE asati atanga kupedza RHCSA kuongorora, zvisinei nekutaurirana kweRHCE hakuzobvumirwi kusvikira zvikwangwani zvose zviripo nemupikisano. Kana tariro isati yawana RHCSA, Red Hat ichabata rekodhi reRHCE rekupikisa rekodhi uye ichawedzera iyo rekodhi kumabhuku eRHCSA akakumbira kana yawana pane imwe nguva inotevera.
Red Hat inotsigira zvose zvingangodaro zveRHCE kufungisisa kutora imwe yezvidzidzo zvadzo zvepamutemo zvekudzidzisa. Kubatanidzwa mumakirasi aya hazvidiwi, uye munhu anogona kutora chete kuongororwa. Vakawanda vanobudirira vanoita zvidzidzo vauya kuchikoro sekunge iye zvino vane rupo rwekupa ruzivo uye ruzivo rwekudzidza kuti kirasi yaiva nemigumisiro inobatsira kwavari.
Red Hat inopa vese vanotarisana neRot Hat Enterprise Performance Tuning Ongororo yeruzivo (EX442) yekufunga kutora Red Hat Certificate yeUnyanzvi muKutevedzera Tuning (RH442) kudzidzisa. Kushanda mukirasi iyi hazvidiwi, saka munhu anogona kutora chete kuongorora. Vakawanda vanokwikwidza vanobudirira avo vauya kuchikoro sekunge iye zvino vane ruzivo rwakakura uye ruzivo vakatsanangura kuti kirasi yakanga ine chigumisiro chakanaka kwavari.
Chiitiko ndechokugadzirira kwakanakisisa kwekuongorora. Izvo zvingaita, kunyange vanhu vane ruzivo pano neapo vane mashizha mukunzwisisa kwavo, saka Red Hat inopa simba rose reRHCJA kufungidzira kutora JB248 JBoss yevatariri I courses. Iyi dzidzo inopa pfungwa yacho uye inogona kunge yakanyatsokwanisa kubatsiririra kuve nekubatanidzwa uye mubhuku unokosha mukugadzirira kwekuongorora.
Red Hat inorondedzera kuti tariro inobata Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) kana Red Hat Certified Engineer (RHCE) vasati vaedza kuongorora uku, asiwo hazvidiwi. Kunzwisisa kwepfungwa mazano muJames Enterprise Edition kunobatsira, asi vadzikwi havafaniri kuva vanjiniya kana kuongorora uku kunosanganisira nzira yekufambira mberi kwekushanda.
Kuti ikubatsire kugadzirisa, nzvimbo dzekuongorora dzinosimbisa nzvimbo dzakasiyana dzaunogona kutarisira kuona dzakafukidzirwa mukuongorora. Izvi zvinoshanda kune vose JBoss EAP 7.
Inobatanidza Red Hat System Administration I uye II pakukurumidza nokukurumidza RHCSA Rapid Track Course (RH199) inotsanangura neRod Hat® Enterprise Linux®7 uye inotarisirwa kuti vanhu vatarise ivo vanove nekubatana kukuru neHinux sangano. Nyaya yacho inotsvaga mitsara inowanikwa muRaff Hat System Administration I (RH124) uye II (RH134) panguva yakakurumidza.
Pamusoro pezvinyorwa zviri pachena, zvinhu zvinofanira kuve zvakagadzirirwa kutora kuongorora Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).
Cherechedzai: Kosi iyi inowedzera pamusoro pekunyatsonzwisisa kwemazuva ano kunzwisiswa kwebhadharo rinotungamirirwa nesangano re Linux. Kufanirwa kunofanirwa kuve nekwanisi yekuita mahofisi anowanzoshandiswa kushandisa shell, shandisa nemahofisi makuru ekusarudza, uye enda pamapeji evanhu ekupa rubatsiro. Kutsigira pasina ruzivo urwu kunokurudzirwa zvakananga kutora Red Hat System Administration I (RH124) uye II (RH134).
Taurirai, ronga, uye rambai makaparadzirwa makombiyuta inoshandisa Red Hat OpenStack Platform. Iyi dzidzo inoratidza hurumende misoro kuti ingashandisa sei kushandiswa kwekombiyuta yemhepo inoshandisa Red Hat® OpenStack® Platform, kusanganisira kuiswa, kugadzirisa, uye kutsigirwa.
Iyi dzidzo inogona kubatsirawo kuti ugadzirire Red Hat Certified System Administrator mu Red Hat OpenStack test (EX210).
Iyi dzidzo inodaro Red Hat OpenStack Platform 8.
Red Hat OpenStack Administration II (CL210) inotangawo kutama kubva kutungamira OpenStack uchishandisa Horizon kusvika kushandiswa kweiyo yakaiswa pamwe urongwa hwekushandiswa kwemagetsi. Unyanzvi hwekuongorora hunovharwa munyaya yacho hunosanganisira: kuronga Red Hat OpenStack Platform inoshandisa OpenStack Director, kutarisira vatengi, mazano, mavhenekeri, zvikamu, mifananidzo, maitiro ekutarisira, uye kukwereka kwepamusoro, kuongororwa kwekombiyuta (kuyerwa nekudzikisa), nekugadzira mufananidzo wakachinjwa.
Ratidza kuti ungaita sei pasi pekugadzirira nekugadzirisa Red Hat CloudForms. Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management inokuratidza kuti ungaita sei pasi pekugadzira nekugadzirisa Red Hat CloudForms.
Chidziro cheChris Hat® cheUnyanzvi muHybrid Cloud Management is execution based declaration exam. Vanhu vanowana Chirongwa cheRud Hat cheUnyanzvi muHybrid Cloud Management vakaratidza unyanzvi nekudzidza kutumira nekugadzirisa nheyo yepamusoro inoshandisa Red Hat CloudForms.
Vatori veSitifiketi cheUnyanzvi muHybrid Cloud Management vanogona kutamba zvinyorwa zvinotevera:
Tumira Red Hat CloudForms
Chigadziro Red Hat CloudForms kuti itaridzane nevanenge vese vashandisi vekugadzira
Shandisa Red Hat CloudForms kuti uite zvinyorwa zvehutungamiri zvehutano hwakanaka
Wedzera simba rako rekugadzirisa zvigadziriro zve Linux uye gadzirira kuongorora yako Red Hat Certified Engineer (RHCE).
Red Hat® System Administration III (RH254), inozivikanwa neRud Hat Enterprise Linux, ® 7, inogadzirirwa vatungamiri veChina vane ruzivo vanobata Red Hat Certified System Administrator (RHCSA®) kuvimbiswa kana kuenzana maitiro uye vanoda kuwedzera simba ravo kuti utonge zvigadziriro zve Linux pane imwe yenhamba yepamusoro.
Dzidzo iyi inotarisana nekutumira uye kutarisira mashumiri ehurumende ari kushandura kuchengetedza Domain Name Service (DNS), MariaDB, Apache HTTPD, Postfix SMTP nullclients, kuronga kupa rekodhi ku Network File System (NFS) uye Server Message Block (SMB), iSCSI vatanga uye zvinangwa , yakagadzirira kurongeka uye kupiswa kwemoto, uye kushandiswa kweBash shell scripting kuita robotize, kugadzira, uye kuongorora sarudzo. Kuburikidza nekero nemaoko-pamairabhu, avo vanobvumirana nemaitiro ekusimbiswa kweRHCSA vachaendeswa kumabasa ose akafukidzirwa neChris Hat Certified Engineer (RHCE) kuongorora (EX300).
Bumbiro rehurukuro uye kuratidza kukwirira kwakakosha kweboka. Iyo yakanyanya kuiswa, maoko-paRat Hat® High Availability Clustering (RH436) inoratidza kuronga kwekuchengetedza, Red Hat High Availability Add-On, uye kugoverwa kwekutsvaga mishandiso yakapiwa neHat Hat Global File System 2 (GFS2) uye Red Hat Gluster Storage .
Yakagadzirwa kune vakuru vakuru veLuxux®, iyo iyi 4-day course inotsanangura zvakajeka maitiro e-lab-based. Iwe uchanzwisisa kuti ungatumira sei uye utarisire huwandu hwekugovana uye mashizha evhavha anopa zvakanyanya kufambiswa kwehurumende mahofisi kune imwe mission-yekuedza inoshandiswa.
Iyi dzidzo inobatsirawo kuronga kweChikwata cheRud Hat cheUnyanzvi mune High Availability Clustering kuongorora (EX436).
Ratidza kuti ungataurire sei Red Hat Satellite server uye ushandise kuti utumire uye utarisire zvigaro. Red Hat® Enterprise Dhipatimendi uye Systems Management inotsvaga mazano nemaitiro anokosha ekugadzirwa kwezvibereko zvakakura zvinoshandiswa uye kutungamirirwa kwekwakadzika Red Hat Enterprise Linux®.
Iyi dzidzo iri paRud Hat Satellite 5.
Kutsigira kuchajekesa nzira yekuisa nayo uye kushandisa Red Hat Satellite server nekunatsiridza ropafadzo dzakapindurwa kupindura kutumira uye kutarisira zvigadziro. Pamberi pemagumo emudzidzi uyu, kusununguka kunenge kwave kwakagadzira zvigaro zvavo zve RPM uye zvinoshandiswa kushandiswa kutarisa kuchinja kune zvinyorwa. Iyi dzidzo inogona kukubatsirawo iwe kuronga kweRed Hat Certificate yeUnyanzvi Mukudhinda uye Systems Management (EX401) kuongorora.
Ratidza kuti ungatanga sei Red Hat Satellite 6
Red Hat Satellite 6 Administration (RH403) inyanzvi yebazi-iyo inotsvaga mazano uye maitiro anokosha ekubereka zvibereko zvakakura zvehurongwa hweRud Hat® Enterprise Linux® maitiro. Zvechokwadi nhengo dzichaona nzira yokutumira Red Hat Satellite 6 pane sevha uye inoitora iyo nemitambo yezvirongwa.
Iyi dzidzo inobva Red Hat Enterprise Linux 7 uye Red Hat Satellite 6.
Kutsigira kuchashandisa Red Hat Satellite kusangana nehupenyu hwekuvandudza mararamiro evanhu vakanyoresa uye yakagadziriswa, uye kuongorora nzira yekugadzirisa yakarongeka ne programming uye Puppet setup administration pakutumira.
Tora zvinotora zvinotarisirwa kutumira uye kutarisira mamiriro ezvinhu chaiwo. Red Hat Virtualization (RH318) inorayira ruzivo rwehutano hwakagadziriswa kuti ingashandise sei zvigadziridzo zvePod Hat® Enterprise Linux® zvakatarisana neRed Hat Virtualization suite.
Maitiro anowana ruzivo uye ruzivo runonyatsoita, kutumira, kutarisira, uye kuendesa makirini eWinux aripo anobatsira chero zvakagadzirirwa Red Hat Virtualization Hypervisor hubs kana maSeva Red Hat Enterprise Linux anoshandisa Red Hat Virtualization Manager.
Dzidzo iyi inobatsirawo makwikwidzi kugadzirira kuongorora Red Hat Virtualization Muongorori (EX318), iyo, kana ikapfuura, inowanikwa iwo Redh Certified Virtualization Administrator (RHCVA) kugutsikana.
Ratidza kuti ungatungamira sei Red Hat Ceph Storage uye uratidze ne Red Hat OpenStack Platform. Red Hat® Ceph Storage Architecture uye Mutungamiri (CEPH125) chikamu cheEmerging Technology chirongwa chemakombiro kubva kuRad Hat Training. Iyi yemazuva mashanu ezuva inotarisirwa kuti vanhu vashande vanogona kutumira Red Hat Ceph Storage mune zvizvarwa zvavo zvakakomberedza uyewo nzvimbo yavo ye OpenStack®.
Red Hat Ceph Storage Architecture uye Mutungamiri (CEPH125) yakarongeka zvakapoteredza zvikamu zve 3. Chikamu chikuru chiri mukati uye kunze kwemaonero eWhite Hat Ceph Storage engineering uye inopa mirayiridzo yekuendesa Red Hat Ceph Storage, kusanganisira Ceph Storage Cluster, Ceph Object Gateway, uye Ceph Block Device. Chikamu chechipiri chinotarisa pamabasa ose ezuva reCeph Storage boka pamwe chete nedzimwe nzira dzekuongorora nekugadzirisa izvo vatariri vanogona kushandisa kuti vakwanise kupa 24 × 7 kusvikirwa kwehutungamiri hwehutano. Chikamu chechitatu chinosangana nekubatanidza kweCeph Storage Cluster ne Glance uye Cinder mu Red Hat OpenStack Platform. Ichi chikamu chinowedzera kuumba Red Hat Ceph Storage sechitsinhanho che Swift nekuchigadzirisa neChestone.
Ratidza kuti ungatanga sei, kuronga, kushandisa, uye kuchengetedza Red Hat OpenStack Platform. Red Hat OpenStack Administration I (CL110) inogadzirirwa misoro yemisoro inenge ichitsvaga kugadzirisa kugoverwa kwekushandiswa kwemamiriro okunze anoshandisa Red Hat OpenStack® Platform.
Iyi kirayiridzo inodzidzisa maitiro ekutumira mazano-e-pfungwa, kuronga, kushandisa, uye kuchengetedza Red Hat OpenStack Platform. Dzidzo iyi inobatanidza hurumende mahofisi: unhu (Keystone), kukwereka kwepamusoro (Cinder), mifananidzo (Glance), kuronga (Neutron), chimiro uye mutongi (Nova), uye dashboard (Horizon).
Taurirai, ronga, uye rambai makaparidzirwa maitiro ekushandisa iyo inoshandisa Red Hat OpenStack Platform. Iyi dzidzo inoratidza hurumende vatariri kuti vangaita sei kugoverwa kushandiswa kwemamiriro ekushandisa iyo inoshandisa Red Hat® OpenStack® Platform, kusanganisira kuiswa, kugadzirisa, nekusimudza.
Red Hat OpenStack Administration II (CL210) inotangawo kutama kubva kutungamira OpenStack uchishandisa Horizon kusvika kushandiswa kweiyo yakaiswa pamwe chete mutsara webunhare. Unyanzvi hwekuongorora hunovharwa munyaya yacho hunosanganisira: kugadzira Red Hat OpenStack Platform inoshandisa OpenStack Director, kutarisira vatengi, mishonga, mavhenekeri, zvikamu, mifananidzo, maitiro ekutarisira, uye zvikwereti zvakachengetwa, makombiyuta (kurema nekuderera), nekuvaka mufananidzo wakavezwa.
Ratidza kuti ungaita sei pasi pekugadzira nekugadzirisa Red Hat CloudForms. Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Administration (CL216) inokuratidza nzira yekugadzira nekushandisa Red Hat CloudForms.
Kutsigira kuchaona kuti ungaita sei zvisikwa zve CloudForms, zvinosanganisira Red Hat Enterprise Virtualization, ita nekuongorora nekugadzirisa zvirongwa, magadzirirwo emichina yemichina (VMs), uye kununura mitsara yakasiyana.
Ratidza kuti ungashandisa sei Red Hat CloudForms zvishandiso zvekushandisa. Red Hat CloudForms Mafambiro Emafuro Akawanda (CL218) anokuratidza kuti ungashandisa sei magadzirirwo eDod Hat CloudForms. Maitiro anozoona nzira yekushandisa mishonga yakakosha, kuisa mamita mano, kuronga kuongorora uye kubatsirwa, nekugadzira zvirongwa.
Ita Apache Qpid sechimiro chekubatsira kana sechikamu che Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Apache Qpid Kuparidzira neHat Hat® Enterprise Linux® OpenStack®Platform (CL314) ndeyevatariri vanogadzirisa, gore revatariri, uye gore vatariri vanofunga kugadzirisa Apache Qpid sechimiro chekubatsira kana sechikamu che Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.
Ratidza RabbitMQ sechimiro chekubatsira kana sechikamu che Red Hat OpenStack Platform.
Iyi yedzidzo inotarisirwa kune vatungamiri vekusimudzira, gore revatungamiri vegore, uye gore vatariri vanoreva kureva RabbitMQ sechinhu chakanaka kubatsirwa kana sechikamu che Red Hat OpenStack Platform.
RabbitMQ Kutumira neRud Hat OpenStack Platform chikamu chekusimudzirwa kwezvinhu zvitsva zvedzidzo kubva kuHarare Hat Training. Kukwidziridza zvidzidzo zvitsva zvinokurudzira uye zvinobatsira uye zvinotungamirirwa semabhati ekutungamirira.
Tora zvakawanda pamusoro pezvinhu zvakakwirira-zvekugadzirisa zvinhu uye zvishandiso zveRud Hat OpenStack Platform.
High Availability yeGreen Hat® OpenStack® Platform (CL332) ndeyevatariri vekugadzirisa uye cloud cloudators vanofarira zvakakwana zve Red Hat OpenStack Platform. Iyi dzidzo inopa kupfurikidza zvakanyanya mu-high-accessibility components uye zvigadzirwa kupfuura Red Hat OpenStack Administration (CL210).
Iyi sangano inoshandisa nzvimbo yakasununguka yekugadzirisa bunching uye yakagadzirirwa-yakagadzirirwa zvirongwa zvinowanikwa uye inopa chirongwa chakareba kwazvo chekubatana navo neRud Hat OpenStack Platform. Kutsigira kuchaita imwe neimwe yehutungamiri nenzira inowanikwa zvikuru uye kuedza failover mamiriro ezvinhu. Kutsigira kuchashandisa Pacemaker, Corosync, zvigadzirwa zve CMAN, uye HAProxy kuti iite boka uye mamwe mashizha akareba.
Ita, edza, uye uchengetedze Java EE-maitiro anobvumirwa kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira
Yakagadzirirwa pakati pezinga re Java ™ vakagadzira, JBoss® Enterprise Application Development (JB225) inokuzivisai ne Java Java EE 6 zvivako, tsanangudzo, uye shanduro programming interfaces (APIs).
Ita, edza, chengetedza Java EE-yakagadzirirwa maitiro
Ratidza kuti ungaita sei, kuedza, uye kuchengetedza Java EE-maitiro anofadza kubva kutanga kusvika kumagumo uchishandisa Eclipse-based Red Hat® JBoss Developer Studio.
Ita basa rakakwana zvachose Java application
Kusvika pakasvika mazita uye zvakanyanya kushandisa nyaya, maoko-pamusoro pemakwenzi anokuziva nekukura kwekushanda kwebhizimisi kushandiswa uchishandisa Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 6, Zvinyorwa uye Kubvuma I, Arquillian, JBoss Hibernate, RESTEasy, HornetQ, nezvimwe zvakabudirira zvakabatana kuita zvakakwana zvinobatsira kushandisa Java application.
Shingairira zvakakwana, zvizhinji zvekuita basa
Ratidza kuti ungagadzira sei, multitier kuedza kushandira kujekesa JavaServer Faces (JSF) 2 pamusana pekupedzisira, Java Java ye Rest Rest Web Services (JAX-RS), se Enterprise JavaBeans (EJB), uye Java Persistence API (JPA) unyanzvi hwekuchenjera, uchishandisa zvakanakisisa-kugadzirisa zvirongwa, coding, nekuedza maitiro.
A Single Point Of Control Kuti Ushandise, Chengetedza, Uye Chengeta Zvako Red Hat Jboss Enterprise Middleware Products, Applications, And Services.
Red Hat JBoss Operations Network, chikamu chinokosha che Red Hat JBoss chakatarisa zvipo, chinopa kushanda muhutungamiri uye kuongorora mikana yekugadzirisa zvakanyanya vazhinji veRud Hat JBoss mamiriro ekushanda, zvichikubatsira kuti uwedzere kubereka kwekushanda, kuderedza mari, uye kuvimbisa dambudziko rekupedzisira kwevashandi vako.
Red Hat JBoss Operations Network, chikamu chinokosha che Red Hat JBoss chakatarisa zvipo, chinopa kushanda muhutungamiri uye chekuona mikana yekugadzirisa zvakakwana chikamu chikuru cheRuff Hat JBoss mamiriro ekushanda, zvichikubatsira kuwedzera kushandiswa kwekushanda, kuderedza mari, nekugadzirisa chiitiko chakanaka chekupedzisira kwevashandi vako.
Kuvandudzwa kweSwitchYard neRed Hat JBoss Fuse Service Works inoendesa kuongorora kweJBoss Fuse Service Works uye kuti SwitchYard inopindira sei mukati mayo makiromita, inotevedzwa nekuratidzwa kwezvikamu zvishomanana zveChinchYard zvakashandisa kushandiswa, kusanganisira JavaBean, Camel, Mitemo, uye Bhizimisi Process Model uye Notation (BPMN). Izvi zvinongororwa nekuratidzwa uye kushandiswa kwemasuo akawanda nemisungo inobvumira vanjiniya kuti vashandire pakati pemamiriro ekushandura yeYashchYard uye "kunze kwenyika." Mienzaniso yezvipinza / mazvisungo zvinosanganisira HTTP, SOAP, SQL, REST, kuzivisa (JMS), mail, uye iyo inongova chidimbu chechando. Mitsara inotevera inosanganisira kushandiswa kweValidators uye kuchinja kwekunyengeterera mharidzo yehupenyu sezvainodzidza kuburikidza nemamiriro ekubatana, uye kuwedzera kuedza / kutarisa matambudziko. Chengetedzo yakafukidzwa mune chikamu chakasiyana chechikoro.
Ratidza kuti unogona sei kuumba, kugadzirisa, kuedza, uye kutumira kukurudzira kusanganiswa kwezvirongwa (EIP)-based applications zvinoshandisa Apache Camel.
Kameri Kubudirira neRaff Hat® JBoss® Fuse (JB421) inoita ma-hands-on, ma-lab-based course iyo inopa Java ™ vagadziri uye varonganisi kunzwisisa kweApache Camel uye kuvandudzwa uye zvigadzirwa Red Hat zvinowedzera mukutsigira mberi kweKamel.
Ngamera yekufambira mberi yakarongedzwa kumativi ose:
Zvidzidzo zvinosanganisira kuunganidza kana kuronga kwekutonga kuburikidza nevanenge vese mapurogiramu nemagumo ekupedzisira
Mapurogiramu ayo anodzorera, kududzira, uye kuchinja mazwi mukati meKameri.
Zvikamu zvinopa simba rokugumisa magumo anoshanda pamwe nenyika yekunze nekuwana uye kutumira mameseji.
Ratidza kuti ungabatana sei nekushanda kwekugadzirisa kushanda mune zvebhizimisi.
Kugadzira App Workflow Applications ne Red Hat® JBoss® BPM Suite (JB427) ndeyevanjini nevanogadzirira vanoda kusimbisa kushanda kwekugadzirisa kushanda mune zvebhizimisi.
Kuburikidza nemaoko-pamusoro pemakwenzi, kushandiswa kwepasi kunotora muunyanzvi uye zvikamu zve Red Hat JBoss BPM Suite, inokosha uye inosimudzira bhizimisi kubata kuratidza (BPMN 2.0), uye kuyananisira kwebasa basa mu Java ™ SE uye Java EE yekushanda. Asi zvisinei nekugadzira kushanda kwekushanda, kushandiswa kwepfungwa kuchaona maitiro ekugadzirisa unyanzvi uye kuongorora maitiro aya achishandisa Red Hat JBoss Developer Studio. Kutsigira kuchajekesa nzira yekutumira nzira yebhizimisi uye kuvhara nguva yayo yokumhanya.
Vashandi Vekushandiswa Kwebasa neRud Hat JBoss Fuse Vachitora vanozotora maitiro anodiwa kutarisirwa, kutumira, uye kudzorerazve Red Hat JBoss Fuse uye kuvaka nheyo dzemusangano we OSGi-based uchishandisa Red Hat JBoss Fuse's components, kusanganisira: Bundle Administration Server vatarisira ... Maona
Taurirai, ronga, rongai, uye tumira OSGi-maitiro akafanana
Venture Service Bus (ESB) Kutumirwa neRod Hat® JBoss® Fuse ndiyo maoko-iyo inoita kuti System Administrators neJava ™ vagadziri vatsanangurire Red Hat JBoss Fuse, iyo inoshandiswa zvakasimudzirwa kuparadzirwa kweApache ServiceMix.
Vatori vechikamu vanotora muhutano hunotarisirwa kutarisirwa, kutumira, nekudzorera Red Hat JBoss Fuse uye kuvaka nheyo dzemagariro eOGi-based based uchishandisa Red Hat JBoss Fuse's elements, kusanganisira:
Sangano achishandisa Fuse Fabric, Hawt.io, uye Red Hat JBoss Developer Studio
Tora nguva yekutsvaga kutarisira JBoss Fuse, JBoss AM-Q, uye Apache Camel
Red Hat® JBoss® Fuse Rapid Track (JB439) yedzidzo ye5-iyo inopa Java ™ vateereri, vadzidzisi, uye Red Hat JBoss Fuse chairmen kunzwisisa kweHot Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss A-MQ (Java Messaging Service dealer ), uye Apache Camel.
Tora maitiro aunofanira kugadzira nekuita basa rinosungirirwa maitiro (EIP) uchishandisa Camel, uye ona nzira yekutsanangurira EIP mu Red Hat JBoss Fuse-inobatsira kubhadhara (ESB) inobva Apache ServiceMix. Uyezve, ona kuti ungashandise sei Red Hat JBoss A-MQ-inozivisa chikwata kune Apache Camel.
Ratidza kuti ungaratidza sei mafungiro ezvinyorwa uye zvinhu zvakakwana, somuenzaniso, matafura, maonero, uye maitiro.
Red Hat® JBoss® Data Virtualization Kufambira mberi kunoratidza vanyori vepa database uye vatariri nzira yekuenzanisa zvinyorwa zvemashoko uye zvinhu zvese, semuenzaniso, matafura, maonero, uye mazano. Kuburikidza nemaoko-pamusoro pemakwenzi, maitiro anozoona kuti angatumira sei zvinhu izvi zvese zveJDBC uye web usefumi rekushandisa. Iyi dzidzo inogonawo kubatsira kubvumirana kunokwikwidzana mukugadzirira kwavo Red Hat Certificate yeUnyanzvi muDhina Virtualization Exam (EX450).
Ratidza kuti ungataurira sei matrix, ruzive shanduro yekuchengetedza, bunch uye kuchengetedzwa kwezvokuchengetedza, uye denga ndiro muganhu kubva ipapo.
Red Hat® JBoss® Data Grid Development (JB453) inonyanya kurongeka pamusoro pehuongorori hwekuchengetedza uye kutonga kwezvikamu zvezvitoro. Kutsigira kuchaona kuti ungasvika sei kuzvitoro mumabhuku uye mabhuku akare (akabatanidzwa uye asingasviki). Uyezve, kutarisana kuchaona nzira yekuchengetedza ruzivo rwemashoko, kuvhara ruzivo rwemashoko mabhuku, nekutsvaga ruzivo rwemashoko.
Ratidza kuti ungaumba sei uye uongorore mitemo uchishandisa UI yemifananidzo yeBusiness Central.
Kunyora Mitemo neRod Hat® JBoss® BRMS (JB461) inonyatsozivikanwa neRod Hat JBoss BRMS inotungamira motokari uye chikepe. Muchikoro ichi, kutaridzika kunoratidzira nzira yekusika uye kuongorora mitemo uchishandisa UI yeBusiness Central.
Iyi dzidzo inobva kuna Red Hat JBoss BRMS 6.
Kusanganiswa kweKunyora Mitemo (JB461) uye Kuvandudza Mitemo yeMapiro ne Red Hat JBoss BRMS (JB463).
Actualizing with Red Hat® JBoss® BRMS inogadzirisa zvinyorwa kubva kumabhuku maviri ekunyora uye Red Hat JBoss BRMS (JB461) uye Developing Rules Applications ne Red Hat JBoss BRMS (JB463). Inoratidza vataridzi vebhizimisi, vatungamiri vekugadzira, uye Java injini yekushanda kwekushanda mazano ekuita, kuedza, kuongorora, uye kutonga mitemo yebhizimisi.
Kutsigirwa kunopiwa huno nehumwe, maoko-pamusoro pemabasa anoshandisa Red Hat JBoss Developer Studio uye Red Hat JBoss BRMS iyo inofanirwa kupa kupa mikana yekuita uye kutarisira bhizinesi rinotarisira mune zvisikwa. Iyi dzidzo inogona kukubatsirawo kuti ugadzirire Chikwangwani cheRud Hat Chaunyanzvi muBusiness Rules Management Exam (EX465).
Gadzira unyanzvi hwako nemaoko-panzira iyo inobatanidza mberi-uye kumashure-office applications
Kuvaka Advanced Red Hat Enterprise Applications (JB501) chikamu chekambani yekugadzira Red Hat® JBoss®. Dzidzo yacho inobva pane imwe nyaya yekuongorora. Icho chinokura, maoko-panzira iyo inonyadzisa inosungirira mberi-uye kumashure-ofisi.
Dzidzo yacho inobva pane imwe nyaya yekuongorora. Zvimwe zvishomanana zveRud Hat Middleware zvinhu zvinoshandiswa muurongwa uhwu hunosanganisira Red Hat JBoss Data Grid, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Red Hat JBoss BPM Suite, Red Hat JBoss Fuse, uye Red Hat JBoss A-MQ. Kunyadziswa kunoshandisa Java ™ EE 6, Java Persistence API (JPA), mafomu emabhizimisi, mitemo yebhizimisi, Camel courses, kuchengetedza, uye kubatana muyanano. Zvakanyatsorongeka, mukushandurana kwemasangano pamwe nekuremekedzana nehurukuro, sezvavanoshandira kurongwa hwekupedzisira. Maitiro anotsigirwa kuti ave nekudzidza nekudzidzira kwepamusoro mune zvinhu zvakashandiswa.
Tumira kugadzirika, kufambidzana zvakanyanya kugadziriswa kubva pane-the-rack midziyo uye mumamiriro ezvinhu emakore.
Iyi dzidzo ndeyevakuru vakuru uye vatungamiri vezvikwereti vane shungu dzekutumira kugadzirika, simba rinowanikwa nyore nyore kubva kune-ra-rack midziyo uye mumamiriro ezvinhu emakore.
Iyi dzidzo inodaro Red Hat Gluster Storage 3.
Kutsigira kuchaona nzira yekuisa nayo, kuronga, nekuchengetedza boka reVadh Hat Storage servers. Dzidzo ichanyatsoongororawo zvinyorwa zvepamusoro zveIndaneti zvinyorwa zvepamusoro (CIFS) uye hurongwa hwekugadzirisa zvinyorwa (NFS) dzinoshandisa Cluster Trivial DataBase (CTDB), yakaunganidzwa pamwe nekunamatira kuchengetedza, uye geo-kudzokorora. Pakupedzisira, pasi pekutsvaga kuchawana nezveMutambo weHadoop weRud Hat Storage, kutanga, uye geo-kudzokorora.
Iyi dzidzo inogona kukubatsira kugadzirira Chikwangwani cheRud Hat cheUnyanzvi muHybrid Cloud Storage Exam (EX236).
Ratidza kuti ungaratidza sei, kutarisira, uye kuronga simba uye OpenStack.
Bhuku rinonzi Red Hat OpenStack Administration III (CL310) rinopa maoko akawandisa-kugadzirira kuvadzidzisi vanogadzirisa mashandisirwo ekushandisa nzira dzakachengetwa dzekudzivirira zvikamu zve Red Hat® Ceph Storage uye maitiro ekugadzirisa maitiro eOverStack® Neutron. Kutsigira kuchagadzira mamiriro eCefh uye kugadzirwa kwayo sekupedzisira kumusana weWorldStack, uye kuronga nekushandisa zvinhu zvinoputika zveWorldStack Neutron.
Iyi dzidzo inodaro Red Hat OpenStack Platform 6.
Kutsigira kuchagadzira nzvimbo yeCef uye urongwa hwayo sekupedzisira kumusana weWorldStack, uye kugadzira nekushandisa zvikamu zvinoputika zveWorldStack Neutron.
RHCE Chiratidzo - Kuti uve Red Hat Certified Engineer